Amanani - anatod
Isoftware ithengisiwe ngokupheleleyo, hayi ngemodyuli. Iindleko zenyanga zibandakanya ukuhlelwa, ukuhlaziywa, ukuxhaswa, ingcebiso kunye nokugcinwa kwamaseva.
Los uphuhliso lwexesha elizayo, ecelwe ngumthengi malunga nomsebenzi we-ISP kunye nezinto ezenziweyo, nazo zikwanjalo ibandakanyiwe.
Onke amaxabiso akwidola yeDola.
Cela amaxabiso kwingingqi yakho ... IArgentina, eMexico, eBrazil
599 / ngenyanga
Inkxaso yomnxeba, i-imeyile, iSkype, iWhatsApp, iTelegram.
Uhlaziyo kunye noGcino
I-Amazon AWS Basic iquka
I-APP Iiklayenti kunye neeNgcali zifakiwe.
849 / ngenyanga
1.149 / ngenyanga
1.449 / ngenyanga
1.899 / ngenyanga
2.399 / ngenyanga
2.999 / ngenyanga
3.899 / ngenyanga
Ukuseta kokuqala kuya kuhlawuliswa uphuhliso lwenkqubo, ebandakanya ukumiselwa, uqeqesho lwe-intanethi, ukufuduka kwedatha. Intlawulo yenziwa ngeentlawulo ezithile xa zisiwa.